हाम्राे पिपलबाेट » किन लाग्छ डर ? किन लाग्छ डर ? – हाम्राे पिपलबाेट
हामीलाई लाग्ने अर्को डर हो, गल्ती पो होला कि ? गल्ती हुने डरकै कारण हामी केही पनि काम सुरु गर्दैनौं । कुनैपनि प्रयास गर्दैनौं । जब केही गर्छौं, केही भन्छौं । गल्ती होला भन्ने डर लाग्छ । त्यही डरले हामीलाई केही प्रयास गर्न नै दिदैन । जबकी काम गर्दा गल्ती हुन्छ । गल्ती हुनु मानविय कुरा पनि हो । मानिस रोबोर्ट होइन । र, हरेक गल्तीले केही न केही पाठ सिकाउँछ ।
हामी जब केही गर्ने सोंच बनाउँछौं । तब मनमा एउटा कुरा खेल्न थाल्छ, अर्काले केही भन्ने हो कि ? अर्काले के सोच्छन्, के भन्छन् भनेर हामी सधै सर्तक रहने प्रयास गर्छौं । जबकी आफुलाई सोध्दैनौं, यो ठिक वा बेठिक ? के मैले सही गरे ? यदि आफ्नो मनले सही गरेको भन्ने निचोड निकाल्छ भने अरुले केही भन्छ कि भनेर किन डराउनु ?